Kinnear 6620 heart it-final2
MEDICINES: Drugs used to treat heart problems & what they do
Daawooyinka loo isticmaalo daaweynta cillada
wadnaha iyo waxa ay qabtaan
Caruurta badankood gebi ahaanba uma baahna badiyaan. Waa daawooyin daciif ah oo isu
daawooyin. Daawooyinka waxaa loo yaqaanaa labo magac. Magaca kiimikaalka ama magaca iyadoo lala kaashanayo daawooyin kale oo loo guud oo ah magaca rasmiga ah ee loo yaqaan generic ama nooca shirkadaha suuq geeya.
4. Potassium supplements. Daawada loo
Caruurta qaar waxay u baahnaan doonaan hal isticmaalo dib u soo celinta botaasiyamka
jirka ka lumay. Daawooyinka loo isticmaalo
kiimiko muhiim u ah jirka. Daawadani waxaa rasmiga ah ee loo yaqaan generic ama nooca loo isticmaalaa dib u soo celinta botaasiyamka shirkadaha suuq geeya. Caruurta qaar waxay u 1. Digoxin. Daawada caawisa
muruqyada wadnaha loona isticmaala
isticmaala qudaarta caadiga ah sida cabitaanka daaweynta garaaca wadnaha oo bata.
liinta, yaanyada, mooska badalka qaadashada 5. Hydralazine, Captopril & Enalapril
Daawooyinka dejiya cadaadiska
dhiigga.Daawooyinkan waxay jilciyaan
xididada dhiigga qaada sidaa awgeed waxaa hoos u dhaca cadaadiska dhiigga. Waxaa loo ayey keeni kartaa daawadu haddii bukaanka noqdo. Waxaa kale oo loo isticmaali karaa 2 Frusemide & Chlorothiazide.
Daawooyinka loo isticmaalo in ay kaadida
badiyaan. Waa daawooyin u ogolaan kara
kelyaha in ay sii daayaan kaadi badan.
6. Propranolol Daawada loo isticmaalo
koloraydh, botaasiyam iyo biyaha. Wadnuhu yareynta wadne garaaca badan iyo isu
markii uusan si fiican u shaqeyneynin biyaha imaatinka muruqyada wadnaha.Waxaa
iyo cusbada ayaa ku bata jirka, beerka iyo wadne garaaca faraha badan iyo isu imaatinka sahlana way u fidaan markaa si fiican ayaad u karka iyo yareynta isu imaatinka cilladaha neefsan kartaa. Isku day inaad iska yareyso bambeeya, xiritaanka socodka dhiigga aadaya daawadan waayo cusbada badan waxay hoos u halbowlaha xiriiriya wadnaha iyo jirka.
3. Spironolactone & Amiloride.
isticmaalaa daaweynta wadnaha oo ka gaabiya Waa inaad u siisaa sida saxda ah ee la ogol 7. Antiarrhythmic drugs. Daawooyinka loo
isticmaalo ilaalinta garaaca wadnaha oo
dusheeda adigoo ku xisaabtamaya cunugaaga bata. Waxaa loo isticmaalaa ilaalinta garaaca
Daawo Qaadashada Daawo cusub marka
laguu soo qoro, fadlan isku day sidii aad ku 8. Anticoagulants. Daawooyinka jilciya
dhiigga. Waxaa weeye daawo loo
c. Inta jeer oo la qaadanayo dharaartii iyo d. Muddada la qaadanaayo inta ay la'egtahay.
e. Wax ma u dhimi kartaa daawooyinka kale.
karka iyo yareynta isu imaatinka cilladaha Siinta daawooyinka cunugaaga Tani waa
halbowlaha xiriiriya wadnaha iyo jirka.
daawooyinka loo soo qoray waqtiga sahda ah fahamto sida ilmaha daawada loo siiyo ee ku 9. Sedatives Daawooyinka hurdada keena
qoran dhalada daawada. Daawada sii cunuga ama neerfaha dejiya. Caruurta cudurada
quudinta ka hor. Waxaad isticmaashaa qaado, siiyo ukunta xitaa wuu anfacayaa). Cunuga si yihiin. Tusaale haddii aan u soo qaadano, fiican u qabo adigoo madaxiisa gadaal u yara celiyey. Waxaad hal mar siisaa cunuga in ka badan hal meel marka aad saddex u qeybisid 10. Antibiotics. Antibiyootik. Waa
caadiga ahayn ee daawada. Ha isku dayin in cunuga aad misaasada ugu shubtid daawada.
qabta iyo kuwa aan qabin, siiba si loo ilaaliyo daawada siiso, inyar u kaadi, hadana sii.
11. Intravenous drugs Daawooyinka culus
oo xididada laga qaato. Daawooyinka culus
ugu celinin haddii ay kasoo wareegato shan daawooyinka qaar caloosha marka ay galaan, Nitroprusside, Prostaglandin, Prostacyclin iyo antibiyootiga ah sharoobooyin ayey u badan 12. Paracetamol Barasatamol. Wax dhib ah
yahay, sii biyo uu cabo si aad ilkihiisa uga barasatamol markuu jirkoodu kulul yahay.